Mmalite ndị Egypt “Mumm” na-enweta Ego Nweta Usoro
Mbido Startups North Africa
N'agbanyeghị nke ahụ, ụfọdụ azụmaahịa achụmnta ego na-emechi emechi na ụlọ ọrụ ụfọdụ enwetala ntụgharị dị ala, n'ihi ọrịa ọrịa coronavirus, ụfọdụ ndị na-ebido amalite ka na-enwetakwu ego, (Usoro tupu), iji kwalite uto.
Otu n'ime ụdị mmalite ndị nwere, na nso nso a, nwetara usoro ego A bụ, ihe Ihe mmalite nri-teknụzụ ndị Ijipt, nke a maara dị ka Mumm, nke ọkachamara na nnyefe nke nri a na-eme n'ụlọ, nye ndị ahịa ọ bụla, ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na ebe azụmahịa.
Ebido mmalite ahụ na 2015 ma bụrụ, nke izizi, ka ọ bụrụ ebe ahịa dị n'ịntanetị, ebe ndị ahịa na ndị ahịa nwere ike ịnwe, ohere zuru oke maka nri na-edozi ahụ ọnụ, mana ọ bụ ebe ahụ dị mkpa, ka ọ bụrụ ụlọ oriri na ọ virtualụ sophisticatedụ ọkaibe, maka ndị otu , (SMEs, ebe ọrụ, wdg), ịtụ nri na nnukwu ma nyefee ya, n'oge kachasị dị mkpirikpi.
“Ahia taa, choro ulo oru, ka o sie ike, karie na mbu. Nyere usoro kichin kesara nke anyị wuru, site na afọ ndị gara aga, taa, anyị nọ nke ọma, ịghọta ohere nke ịrị elu mkpa na nnyefe nri, ma ndị na-eri nri taa ma ọ bụ n'ọfịs mgbe ndị otu laghachiri ọrụ ha, na ikike kachasị karịa. Anyị nwere ekele na ntụkwasị obi e nyere anyị, site na ndị na-etinye ego anyị, n'oge ndị a pụrụ iche ", Waleed Abd El Rahman, CEO nke Mumm.
Isi ulo akwukwo 5 Foodtech na North Africa
Top 5 Agtech Startups na North Africa
Isi mmalite 5 Logistics na North Africa
Top 5 Fintech Startups na North Africa
Na 2016 na 2017 n’otu n’otu, mmalite bidoro mkpụrụ ego, si na Egypt VC A15 ma nweta US $ 200,000, site na mmalite 500.
“Ọ bụ ezie na ọ dị ize ndụ maka ndị itinye ego itinyekwu ego na ụlọ ọrụ ndị na-akụ mkpụrụ, n’oge ndị a, ụfọdụ ngalaba, ga-ahụ ohere ị ga-eme nke ọma, ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịnọ n’elu mmiri, n’oge ndị a siri ike. Anyị kwenyere na Mumm nọ, nke ọma, ọ ga-eme nke ọma ”, Tarek Nasr, nke ndị mmụọ ozi Alexandria kwuru.
Apụta Foto: menabytes
Elegharala isiokwu dị mkpa anya n’izu. Idenye aha na cfamedia kwa izu mgbari maka mmelite.
Platform ego ezumike nka dijitalụ na ahịa ahịa nke Africa
South Africa mmalite AURA na-enweta ego $4M Series A
Mobility Startup Shuttlers kwadoro Techstars na-enweta $1.6M
Egypt Fintech Mmalite KIWE na-enweta okirikiri itinye ego mbụ
CareerBox na-ekwupụta Mgbasawanye Africa, malite na Kenya
Ụdị kachasị elu na-ewepụta onyinye pụrụ iche, mbelata ego na Konga Yakata
SabiTeach weputara Atụmatụ Paylater Education
Healthtech Startup DrugStoc na-ebuli $4.4M na ntinye ego Series A
Mmalite E-azụmahịa Chooya na-echekwa $950K
GAIA AFRICA weputara GAIA House for Women Entrepreneurs